gịnị bụ reactive ike? Ihe niile ị chọrọ ịma | Akụrụngwa n'efu
La reactive ike Ọ bụ echiche ọtụtụ ndị amaghị, mana nke nwere ike ịmasị dị ukwuu. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịzọpụta ihe n'ụlọ gị ma ọ bụ azụmahịa ọkụ eletrik ụgwọ. N'ezie, ị hụla nke a gosipụtara na ụgwọ ume gị ma eleghara ya anya.
Mgbe a na-enyocha ike a na-emeghachi omume, ọ bụ okwu na-egosi netwọk sinusoidal, harmonics, mmetụta joule site na netwọk, wdg. Echiche dịtụ iche maka ọtụtụ ndị ọrụ na-amaghị ihe ha na-ekwu. Mana lee ị nwere ike ịghọta n'ụzọ dị mfe ihe ọ bụ.
1 Gịnị bụ reactive ike?
2 Enwere ike iwepu ego a?
2.1 Bankslọ akụ ndị a na-azọpụta n'ezie?
2.2 Kedu ụdị ndị kachasị mma?
Gịnị bụ reactive ike?
Mgbe ị na-ekwu maka netwọkụ eletrik ị nwere ike ikwu maka ngụkọta ike, nke pụtara ìhè. Nke a bụ nchikota nke ike abụọ, ma ọ bụ na okwu ndị ọzọ, enwere ike ire ere n'ime ike dị iche iche abụọ:
Ike ọrụ: bu nke aburu oru (ma obu oku). Nke ahụ bụ, nke igwe ahụ na-eji ma na-ejikọ na netwọk. Dịka ọmụmaatụ, nke na-erepịa ite, ọkụ, igwe onyonyo, akụrụngwa, wdg. A tụrụ ya na kWh.
Na-arụ ọrụ ike: Nke a na ọzọ phantom ume anaghị iwesa n'ihi na bara uru were. Na nke a ọ tụrụ na kVArh (kilovolt-ampere reactive kwa awa). Ejikọtara ya na ngwaọrụ ndị na-eji ihe mkpuchi, dịka igwe ọrụ, ọkpọkọ ọkụ, nfuli, moto eletriki, wdg.
May nwere ike ịnọ na-eche na ọ bụrụ na anaghị eri ike na-emegharị ahụ, gịnị kpatara ya Ha na-akwụ ụgwọ gị n’ego ọkụ eletrik. Ihe kpatara ya bụ na, ọ bụ ezie na ekwesighi imepụta ya, a ga-ebugharị ya, ebe ọ na-abịa ma na-aga na ntanetị na ntanetị ugboro 50 kwa nkeji (European network ndị ọzọ dị ugbu a na-arụ ọrụ na 50Hz). Nke a na - emepụta ọdịiche dị na ike eletrik nke sekit ahụ, na - ebute oke ibu na ahịrị ntụgharị na ndị na-ewepụta ọkụ. Ya mere, ọ dị mkpa iji neutralized ma ọ bụ kwụọ ya ụgwọ.
Nke a na-akpata ụlọ ọrụ ike nwere itinyekwu ego na ngwá ọrụ ọgbọ, na n'usoro nwere ikike nkesa ka ukwuu, yana ndị ntụgharị maka njem na mgbanwe nke ike a na-arụ ọrụ. A na-akwụkwa ụgwọ ndị a niile maka ike imegharị.
Enwere ike iwepu ego a?
Dị ka ụkpụrụ Spanish si dị, ọ bụrụ na reactive ike oriri dị elu karịa 33% nke ike ọrụ nọ na-eri, yabụ ị ga-akwụ ihe dịka 4.15 cents kwa kVArh. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ dị elu karịa 75% nke ike a na-arụ ọrụ, ọ ga-eru ihe ruru 6.23 euro cents kwa kVArh.
Iji belata ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka mmeghachi ume ọkụ, a akụ capacitor. Iji mee nke a, ị ga-akpọtụrụ onye ọrụ aka, ma lelee mmefu ego, ebe ọ ga-abụrịrị ọnụahịa a na-achịkwa nke na-akwụghachi ihe ị ga-echekwa. Ọ bụrụ na ihe ị ga-echekwa dị obere karịa ụgwọ nrụnye, mgbe ahụ ọ gaghị akwụ ụgwọ ... N'ozuzu, ọ na-akwụ ụgwọ, na obere oge ị nwere ike ịlaghachi ego ahụ.
Capaclọ akụ ndị a ọ bụghị naanị zere ahụhụ ahụhụ N'ihi ike a na-emeghachi omume, ha na-enyekwa ohere iji dozie akara ngosi netwọk na ogo nke ọkọnọ ahụ, yabụ ngwaọrụ gị niile ejikọtara ga-enwe ekele maka ya. Ha na-akagbu ume na-abaghị uru nke ike ntanetị chọrọ ma melite ikike ike.
Su ime ihe dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Ngwa ndị a na-eji onye na-achịkwa nke na-akọwa akara ndị ọrụ enyemaka na-ezigara ma na-ekpebi ike nrụpụta nke a ga-akwụghachi n'oge ọ bụla. Dabere na nke a, ọ ga-enye usoro usoro (usoro nke capacitors nke ọ ga-ejikọ ma ọ bụ kwụpụ dị ka ọ dị mkpa) iji merie.
Dị ka a pụrụ ịhụ na vidiyo ahụ, ọ ga-abụrịrị jikọọ na n'ozuzu panel nke nwụnye nke ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ gị. Ndị ọkachamara ahụ ga-enwe ike ịme nzukọ a n'enweghị nsogbu ma ga-enyocha mkpa nke onye ọ bụla na-azụ ahịa iji gbanwee nrụnye iji nye nsonaazụ kacha mma.
Bankslọ akụ ndị a na-azọpụta n'ezie?
Ee, ihe ndị a na-ejikwa iji mezue ike ahụ na-arụ ọrụ nke ọma, na-ebelata echiche nke ụgwọ gị. na € 0. Ya mere, ị ga-akwụ ụgwọ maka ike ọrụ, nke ị na-eri n'ezie maka ihe bara uru. Na mgbakwunye, ị ga-ezere VAT kwekọrọ na ike reactive. Yabụ, na-echekwa ego kwa afọ nwere ike buru ibu. Ọtụtụ ihe na ụlọ ọrụ.
Kedu ụdị ndị kachasị mma?
Ọ bụrụ n ’inwe mmasị ịzụrụ otu n’ime ụlọ akụ ndị a maka ike eletrik ịrụnye ha maka gị, ị kwesịrị ịma ụfọdụ n’ime ha ihe kacha mma:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » General » gịnị bụ reactive ike? Ihe niile ị kwesịrị ịma
Lava lamp: esi eme ulo